लण्डनमा नेपालीले बेच्न थाले कोदोको तीनपाने र,’क्सी, एक बोटलको मूल्य कति ? – Sunaulo Nepal TV
लण्डनमा नेपालीले बेच्न थाले कोदोको तीनपाने र,’क्सी, एक बोटलको मूल्य कति ?
काठमाडौँ । बेलायत (लण्डन)मा ब,’सोबास गर्ने नेपालीहरुले नेपालमा पर,’म्परागत रूपमा उत्पादित हुँदै आएको को,’दोको म,’दिरा (र,’क्सी) बजारमा बिक्रि बितरण सुरु गर्ने भएका छन्।
बेलायतमा कोदोको र,’क्सीलाई ब्रा,’न्डेड बनाउने उदेश्यले कोदो लिमिडेट कम्पनीको स्थापना समेत भएको छ। कम्पनीका अनुसार उक्त र,’क्सीको यही अक्टोबर १० गते अ,’ल्डरशटमा एक औपचारिक रुपमा उदघाटन गर्न लागिएको छ। उत्पादक कम्पनीका अनुसार ‘प्योर कोदोको र,’क्सी’ र ‘तीनपाने कोदोको र,’क्सी’ गरी दुई प्रकारको र,’क्सी उत्पादन गरी विक्री शुरु गर्न लागिएको छ ।
तीनपाने कोदोको र,’क्सीको २० सी एल बोटलमा २०० एमएल र,’क्सी राखिएको छ भने ६० प्रतिशत अ,’ल्कोहल रहेको छ, यस्तै ‘प्योर कोदोको र,’क्सीमा ७० सी एल बोटलमा ४० प्रतिशत अ,’ल्कोहल रहेको बताइएको छ । कम्पनीले ‘प्योर कोदोको र,’क्सी’ प्रतिबोतल २५ पाउण्ड ९९ पेन्स (४१ सय ६५ रुपैयाँ) तोकेको छ।
यस्तै, तीनपाने कोदोको र,’क्सीको १२ पाउण्ड ९९ पेन्स (२ हजार ८० रुपैयाँ) मूल्य तोकिएको कम्पनीले जनाएको छ। विशेषगरी राई, गुरुङ, लिम्बु, मगर, तामाङ, शेर्पालगायत जनजातीहरू माझ कोदोको र,’क्सी निकै लोकप्रिय रहेको छ । उक्त र,’क्सीलाई बेलायतमा व्यवस्थित तरिकाले बेच्न लागिएको कम्पनीको भनाइ छ।
Previous आमिर खानका कारण कैयौं महिला र बालबालिकाको जिवन ब’र्बा’द भयो, पहिला ‘डिभोर्स’ गर्ने अनि उनैलाई साथी बनाउने ?
Next चिनियाँ आवद्धतापछि ताइवानले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग खोज्दै